I-Luxury Apartment (2000 sft) e-Banani-11 iyaRentwa - I-Airbnb
I-Luxury Apartment (2000 sft) e-Banani-11 iyaRentwa
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTanvir
Le Apartment ibekwe kwindawo ye-aristocrat yesixeko saseDhaka umz. e-Banani 11. Indawo ikhuselekile kwaye isakhiwo sigadwe ngokhuseleko lomntu oqeqeshwe kakuhle. Le ndlu ilungele iintsapho ezinabantwana abahamba eBangladesh ngalo naliphi na ixesha ukusuka ekhaya naphesheya. Umnini uhlala phesheya kwaye ugcinwe ngumgcini wakhe 24/7. Le ndlu inefenitshala epheleleyo kwaye ixhotyiswe ngezinto zale mihla kwaye indawo yokupaka yasimahla iyafumaneka kwizakhiwo.
Indawo ineebhalkhoni ezintathu kwaye igadi iphambi kwegumbi lokulala elikhulu. Ine-air-conditioning ngokupheleleyo kwaye ayinayo indlu yangasese encamatheleyo.
4.64 out of 5 stars from 40 reviews
4.64 · Izimvo eziyi-40
Indawo ibekwe e-Banani 11 apho zonke iivenkile ezilungileyo, iivenkile zokutyela, ikhemesti, ii-ATM, njl.njl kumgama wokuhamba we-2-3 min. I-Banani lake yimizuzu nje emi-5 umgama wokuhamba. Iindawo zozakuzo zaseGulshan kunye neBaridhara zikwimizuzu eyi-10-15 yokuqhuba. Iihotele ezintle zeenkwenkwezi ezintlanu ezifana neWestin, i-Amari, iiXesha leSine zikwimizuzu nje eyi-10 uqhuba. Indawo ibekwe kwenye yeendawo ezikhuselekileyo kunye ne-posh yaseDhaka. Indawo engqonge iiApartments igadwe ngabantu bokhuseleko ubusuku bonke.
Umbuki zindwendwe ngu- Tanvir
Ndihlala eOstreliya. Kodwa umkhathaleli wam kukufowunela kude kube ngu-6 pm ukuxhasa ukuhlala kwakho. Indlu igcinwe kakuhle ngoonogada 24/7. Uyakonwabela ubumfihlo obugcweleyo kulo lonke igumbi kunye nazo zonke izinto zangoku kwindawo ekhuselekileyo.
Ndihlala eOstreliya. Kodwa umkhathaleli wam kukufowunela kude kube ngu-6 pm ukuxhasa ukuhlala kwakho. Indlu igcinwe kakuhle ngoonogada 24/7. Uyakonwabela ubumfihlo obugcweleyo kulo…